कोरोना जित्ने प्रसिद्धि लाई ज्या’न मा’र्ने ध’म्की ! – Halkhabar kura
१४ बैशाख २०७७, आईतवार ०८:०२
कोरोना जित्ने प्रसिद्धि लाई ज्या’न मा’र्ने ध’म्की !
काठमाडौं । १७ मार्चमा लाम र म दोहास्थित हम्माद इन्टरनेशनल एयरपोर्टसम्म सँगै थियौँ । यहाँबाट लाम भियतनामको होची मिन्हा र म काठमाडौं फर्कदैं थियौँ । क्वारेन्टाइनमा नै रहेका बेला लामलाई परीक्षणमा कोभीड–१९ को संक्रमण भएको देखियो । हामी दुबै र हाम्रा सबै साथीहरूका लागि यो ठूलो ‘रियालिटी चेक’ थियो । हामीले मिम र बिदाई चिट्ठीमात्रै देखेको कुरा, हाम्रो यर्थाथमा आउँदै थियो ।
मलाई आफुमा भाइरस छ र ममार्फत अरु कोही व्यक्तिलाई सरेको हुनसक्छ भन्ने तथ्य अस्वकार गर्दा बढी सहज महसुस भएको थियो । जब मैले यथार्थ स्वीकारे, त्यसपछि बाटोमा भेटिएका मानिस र आफ्नै परिवारमा ममार्फत संक्रमण फैलिएको हुनसक्छ भन्ने विषय मेरो सबैभन्दा ठूलो चिन्ता थियो । चिकित्सकले परीक्षणपछि ठूलो परिमाणमा भाइरस भेटिएको बताएका थिए, यसको अर्थ यस अवस्थामा ममार्फत धेरैमा संक्रमण सर्नसक्थ्यो । तत्कालै मलाई मेरो घरमा एम्बुलेन्स पठाइयो र मलाई टेकुस्थित अस्पतालको आइशोलेसन कक्षमा राखियो । २२ मार्चमा अस्पताल भर्ना भएयता पहिलो रात नै लक्षण देखिन थाल्यो । मलाई पेटमा निकै पीडा भयो र श्वासप्रश्वासमा समस्या आउँदा रातभर म राम्ररी सुत्न सकिंनँ । जब तपाईं श्वास फेर्दा ध्यान दिनुहुन्छ र हरेक पटक असामान्य हुन्छ, तब कस्तो होला ? मलाई केही दिनसम्म यस्तै भयो ।
नेपालकी कोरोना संक्रमितपछि उपचारबाट निको भएकी काठमाडौंकी १९ वर्षीया युवती प्रसिद्धि श्रेष्ठको संस्मरण फ्रान्सको एक अनलाइनले प्रकाशित गरेको छ । मा अंग्रेजी भाषामा छापिएको उनको संस्मरणलाई यहाँ नेपाली भाषामा अनुवाद गरिएको हो । www.ledragondechaine.com
– souryaonline बाट साभार
Previous भरतपुरका कोरोना संक्रमित पुरुष डिस्चार्ज, बाँकी ३७ जनाको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य
Next आज अक्षय तृतीया, जौको सातु र सर्वत खाने खुवाउने दिन ‘यस्तो छ महत्व’